November 21, 2020 - Padaethar
အပျို နဲ့အအိုတို့ ကွာခြားချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့ သဘာဝတရားက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ ရင်သားကို ပြုပြင်ပါတော့တယ်။ သည်အခါမှာ ရင်သားဟာ မူလကထက်လည်း ကြီးထွားလာပါတယ်။ အလေးချိန်အားဖြင့် တစ်ဖက်ကို တစ်ပေါင် နှုန်းလောက်အထိတောင် ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ အဲသလို ရင်သား ကြီးထွားလာလို့ ရင်သားမှာ အကြောပြတ်သလို အရာမျိုးတွေ ရှိလာတတ်တယ်။ (အပျိုပေမယ့် ဝလွန်း၊ ရင်သား ထွားလွန်းရင်လည်း အလားတူပဲ အကြောပြတ်တတ်တာကို သတိချပ်ကြစေလိုပါတယ်။)ဒါ့အပြင် ရင်သားများဆီကို သွေးပို့လွှတ်မှုကလည်း တိုးပွားလာတဲ့အတွက် ရင်သားပေါ်က သွေးကြောတွေရဲ့ အရောင် ပိုရင့်လာသလို မြင်လည်း ပိုမြင်သာလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နို့သီးခေါင်း အောက်ခြေက အမည်းဝိုင်းကလည်း အရောင် ပိုရင့်ပြီး နက်မှောင်လာပါတယ်။ ကလေးအနေနဲ့ မအေ့နို့သီးခေါင်းကို အလွယ်တကူ တွေ့နိုင်အောင် သဘာဝတရားက ဖန်တီးလိုက်တာပါ။ ကိုယ်ဝန် သုံးလကနေ ခြောက်လအတွင်းမှာတော့ … Read more
သင့် အိမ်ထောင်ရေး ကံကြမ္မာ ဟောကိန်းနည်း များ ….
သင့် အိမ်ထောင်ရေး ကံကြမ္မာ ဟောကိန်းနည်း များ …. တနင်္ဂနွေ (၆) ၊ တနင်္လာ (၁၅) ၊ အင်္ဂါ (၈) ၊ ဗုဒ္ဓဟူး (၁၇) ၊ ကြာသပတေး (၁၉) ၊ သောကြာ (၂၁) ၊ စနေ (၁၀) ဥပမာဗျာ- အသက် (၃၅) နှစ်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသား တစ်ယောက် အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို မိန်းမမျိုးကို ရမှာလဲဆိုတာ တွက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ သူ့ရဲ့အသက် (၃၅)နှစ်နဲ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သက်(၁၇) နဲ့ပေါင်းလိုက် (၃၅+၁၇=၅၂) အဲဒီ (၅၂)ကို (၇)နဲ့ စားကြည့်လိုက်ရင် (၃) ကြွင်းတယ်ဗျာ။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပေတော့။ လွယ်ပါတယ် ။ မခက်ပါဘူး။ ဒီဟောကိန်းကိုတော့ … Read more
အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ခြင်း ( မိန်းကလေးများ မဖတ်ရ )
အချစ်ရေး တစ်ခုမှာ အကြောက်ရဆုံးကတော့ ကိုယ်က စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပုံအပ်ပြီးချစ်ရသလောက် ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲခံရတာပါပဲ။ ဒါဟာ လူတော်တော်များများလည်း ကြုံရလေ့ရှိတဲ့…. ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သလို ခံစားရတာလည်း အရမ်းကိုဆိုးရွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ကိုအပျော်တွဲတာလား၊ အတည်တွဲတာလားဆိုတာ ခွဲခြားသိမြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမယ့်အချက်လေးတွေကတော့ သင့်ကိုအတည်တွဲနေတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင်ကံကောင်းပါတယ်။ (၁) သင့်အနားမှာနေရင် ရယ်မောပျော်ရွှင်နေမယ် သင့်ကိုအတည်တွဲတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သင့်အနားမှာနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူပါ။ ဟန်ဆောင်ပြီး ပျော်တဲ့ပုံဖမ်းနေတာမျိုးနဲ့တော့ အရမ်းကိုကွာပါတယ်။ သူ့ကိုသင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့၊ သင့်အနားသူ ရောက်လာတာနဲ့ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီး ကြည်နူးနေတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ (၂) သူ့ရဲ့အပြုအမူမှာပေါ်လွင်နေတယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ စကားအပိုတွေ၊ တီတီတာတာတွေ သိပ်မပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို အပြုအမူနဲ့ ဘယ်လိုဖော်ပြရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သင့်ချစ်သူက … Read more
ဖုန်းကနေ လိမ်တဲ့ လိမ်နည်းအသစ် တော်တော်များများခံလိုက်ရပါပြီ မနေ့က ၆.၁၀. ၂၀ ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာပါတယ်….ဒကာကြီး ဦးဇင်းက ဒကာကြီးတို့နယ်ဘက်ကပါ….ဒကာကြီးတို့မြို့က ( ) ကျောင်းကိုလဲသိပါတယ်… လိုင်းပေါ်မှာ ဒကာကြီးတို့ ကူညီနေတာတွေ့လို့ ဦးဇင်းကျောင်းမှာသုံးနေတဲ့ ကားတစ်စီး လှုချင်လို့ပါ…ဦးဇင်းက ရွှေကုက္ကိုလ် (မြဝတီမြို့နယ်)မှာ ကျောင်းထိုင်ပါတယ်… ဦးဇင်းဘွဲ့အမည်က အရှင်ခေမိန္ဒ ဓမ္မစရိယ အောင်ပီးသားပါ.ဒကာကြီးတို့အသင်းကို ကားလှုချင်လို့…အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ ပို့ခိုင်းလိုက်ပါ့မယ်…ကားပို့ခစရိတ်ကိုလဲ ဝတ္ထုစွန့်လိုက်ပါ့မယ်..အဆင်ပြေလား လို့ ပြောပါတယ်… ကျွန်တော်လဲ အံသြသွားတာပေါ့…ဖုန်းနံပါတ်က တော့ကိုယ်မသိတဲ့ဖုန်းပါ…ရပါတယ် ဦးဇင်း.. အဆင်ပြေသလိုပို့ခိုင်းလိုက်ပါ လက်ခံပေးပါ့မယ်ပေါ့….အဲ့ဒါနဲ့ ဖုန်းနံပတ်တခုပေးပါတယ်… ( …..)အဖွဲ့ က အရာရှိ ဆိုပဲ….ကျွန်တော်လဲ ဖုန်းခေါ်ကြည့်တော့…စောအယ်ထူး ဆိုလား မသိပါဘူး…ဦးဇင်း က ပို့ခိုင်းထားတာ မှန်ပါတယ်….ဘယ်အထိပို့ပေးရမလဲ ဆိုတော့ တိုက်ကြီးအထိဆို ရပီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်… ခုန ဆက်တဲ့ ဦးဇင်း … Read more
၂၀၂၀ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလအတှကျ နသေ့ားအလိုကျ အကြိုးပေး ထီဂဏနျးမြားနှငျ့ ထီထိုးရမညျ့အခြိနျအပိုငျးအခွား ထီထိုးသညျ့သူတိုငျး ထီပေါကျကိနျးရှိသညျ ၂၀၂၀ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလအတှကျ နသေ့ားအလိုကျ အကြိုးပေး ထီဂဏနျးမြားနှငျ့ ထီထိုးရမညျ့အခြိနျအပိုငျးအခွား တနင်ျဂနှသေားသမီးမြား – ခေါငျးရငျးဘကျက သီခငျြးဆိုသံ ၊ သီခငျြးသံ ၊ ရယျမောသံကွားရငျ ထိုးနိုငျပါတယျ …။ မိမိနာမညျကို နိမိတျကောကျပွီးထိုးနိုငျပါတယျ …။ ထနျးလကျြစားပွီးထိုးပါ …။ စနနေေ့ နံနကျ (၉)နာရီမှ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနဈအတှငျ အဖွူရောငျမြားမြားပါသော အဝတျအစားဝတျဆငျပွီထိုးပါ …။ ( ၁၅ ၊ ၁၉ ၊ ၄၆ ) အတှဲ မြားမြားပါတဲ့ လကျမှတျကို ရှာပွီးထိုးပါ …။ တနင်ျလာသားသမီးမြား … Read more
အဘဦးဖိုးနီပြောတဲ့ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ ပါသူများအကြောင်း . ဒီမနက်လဲ နံနက် (၁-၀၀)လောက်မှာနိုးလာပါတယ်။ခါတိုင်းဆို ဘုရားကန်တော့သစ္စာပြုပြီး စာဖတ်၊ပြီးရင် တရားထိုင်ပြီးက ရေးခြင်တဲ့စာရေးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြန်လှဲပါတယ်။ ဒီမနက်ကတော့ စာမဖတ်အားဘဲ ရေးခြင်ဖော်ပြခြင်နေတဲ့ကိစ္စ ရပ်လေး တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ငါးပါးသီလ လုံစွာနေထိုင်နေပေမဲ့ လောကဓံဒါဏ်ကို ခံနေရတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ။ မနေ့ကတော့ ဘုရားစာတွေရွတ်ပေမဲ့ ဘဝမတိုးတက်သူတွေ အနှောင့်အရှက်ခံနေရသူတွေကို ပရိကံလိုအပ်ချက်ဖြန့်ဝေပေး ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေ့ကတော့ ငါးပါးသီလ လုံပါလျက် မပြည့်မစုံဖြစ်နေကြရသော မိတ်တွေအတွက်ပါ။ စာတွေလိုက်ဖတ်တဲ့အခါမှာ ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါရင် အရာရာပြည့်စုံမယ် ကြီးပွားမယ်လို့ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ရပါတယ်။ သုတေသနအရ တဝက်မှန်တဝက်မှားပါတယ်လို့ကျွန်တော် အခိုင်အမာပြောပါ မယ်။ ဘာကြောင့်ပြောနိုင်သလဲဆိုရင်လက်ခဏာပညာရပ်ကို(၁၃)နှစ်သားကစတင်ရင်းနှီးပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အဆက်မပြတ်သုတေ သနလုပ်ခဲ့လို့ပါဘဲ။ လက္ခဏာပညာရဲ့အားသာချက်က တွက်ချက်နေစရာဘာပစ္စည်းဘာအထောက်အကူမှမလိုဘဲလက်ကိုယူကြည့်တာနဲ့ ခြုံငုံပြော … Read more